Ny fivoaran'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny amin'ny iOS sy iPadOS amin'ny famoahana ny Time of Use API | Vaovao IPhone
Ny fivoaran'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny amin'ny iOS sy iPadOS miaraka amin'ny famoahana ny Time of Use API
Angel Gonzalez | 02/08/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 30/07/2021 10:13 | iOS 15, About us
Ny iOS 12 dia nampiditra tamin'ny taona 2018 ny andiana fiasa voatanisa ao amin'ny anaran'ny Fotoam-pampiasana. Ity safidy ity izay tafiditra ao anatin'ny Fikirakirana ireo rafitra dia endrika ataovy fantatry ny mpampiasa ny fampiasana ireo fitaovana ary koa ny manandrana manome toky ho an'ny fahasalamana nomerika. Indrindra indrindra amin'ny fiheverana ny fitomboan'ny isan'ny ora lanin'ny olona eo alohan'ny efijery. Taty aoriana dia nampiasa azy io ho fitaovana ho an'ny Fanaraha-maso ny ray aman-dreny. Volana vitsivitsy lasa izay, ao amin'ny WWDC 2021 Nambara izany ny fisokafan'ny Time of Use API ho an'ny mpamorona, mamela ny rafitra ara-dalàna hifehy ny fampiharana azy ireo manokana.
Apple manokatra Time of Use API ho an'ny mpamorona
Ny mpampiasa dia afaka mampiasa ny API amin'ny fampiharana fanaraha-maso ny ray aman-dreny hanohanana fitaovam-pitaizana lehibe kokoa. Ny API dia manome ny mpamorona fiasa lehibe toy ny fetra afovoany sy ny fanaraha-maso ny hetsiky ny fitaovana mba hanaovana laharam-pahamehana ny fiainana manokana.
Rindrambaiko maro no natomboka nanomboka ny taona 2018 miaraka amin'ny fampidirana ny Mampiasà fotoana ao amin'ny tontolo iainana Apple Nesorina izy ireo satria nandika ny fitsipiky ny App Store. Ny ankamaroan'ireo fitsipika ireo dia ny fampidirana ny fifehezana ny hetsika ataon'ny antoko fahatelo tsy misy fanaraha-maso afovoany avy amin'i Apple. Nefa na izany aza, miaraka amin'ny fahatongavan'ny Time of Use API, natao ho an'ny mpamorona rafitra mifehy hiantohana ny fiainanao manokana.
Tadidio fa ny Fotoana fampiasana dia misy safidy maromaro, anisan'ireny ny: fotoana tsy mandeha, avela hatrany, fetran'ny fampiasana ny fampiharana, fetran'ny fifandraisana ary ferana. Ireo fitaovana dimy ireo dia mamela ny mpampiasa tantano ny fifehezana ny fotoana laninao eo alohan'ny fitaovana. Ho fanampin'izay, tsy ny iOS sy ny iPadOS ihany no manana an'io fehin'aina fitaovana, fa ny macOS koa dia mampifangaro azy.
Ny tombony amin'ny fanokafana ny API Ny oram-panidinana amin'ny iOS, iPadOS, ary macOS dia miankina amin'ny ankamaroan'ny ray aman-dreny. Ary amin'ny fifehezana dia mibaiko ny zanany izy ireo rehefa mampiasa fitaovana Apple:
Azon'izy ireo atao ny mizaha ny tantaran'ny fananahana, fizahana sns. Mba hisorohana azy ireo tsy hahatratra ireo seho na doka tsy ilaina amin'ny sehatra mivantana.
Azon'izy ireo atao ny mampifandray ny zanany amin'izay toerana heveriny fa tsy mety.
Ny hetsika isan'andro dia azo zahana amin'ny telefaona, solosaina na takelaka.
Avela hanara-maso ny kilasy sy ny fanao amin'ny Internet an'ny zanakao.
Ny fe-potoana efijery dia manome anao ny fitaovana ilainao hanampiana ny ray aman-dreny sy ny mpiambina hanara-maso ny fampiasana Internet an'ny zanany.
Ny beta fahatelo ho an'ny mpamolavola ny rafitra miasa Apple vaovao dia efa misy
Araka ny voalazan'i Apple, ity rafitra mifehy ny API ity dia ahafahan'ny mpamorona manova ny hetsika ataon'ny rindranasan'izy ireo amin'ny famaky isan-karazany. Anisan'izany ny:
Hampandre angona momba ny fampiasana tranonkala
Mazava ny tantara
Manaova hetsika rehefa misy ray aman-dreny na mpiambina manakana URL na manomboka mampihatra fameperana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny fivoaran'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny amin'ny iOS sy iPadOS miaraka amin'ny famoahana ny Time of Use API
Telegram dia havaozina amin'ny alàlan'ny antso an-tsary miaraka amin'ny mpijery 1000
Apple dia lany tahiry amin'ny titanium Apple Watch Series 6